အကျွန်ုပ်တို့၏ အလုံးစုံတို့၌ အလုံးစုံဖြစ်သော ယေရှုခရစ်
'...ထိုစည်းစိမ်ကား၊ ဘုန်းအသရေကို မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းတည်းဟူသော သင်တို့အထဲ၌ တည်တော်မူသော ခရစ်တော် ပေ တည်း' (ကော၊ ၁း၂၇)
ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုနှင့်ဆိုင်သော အံ့ဘွယ်သောအကြောင်းများစွာကို လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လေ့ လာခဲ့ရာတွင် သူသည် ဘုရားသခင်ကတိတော်နှင့်ဆိုင်သောကယ်တင်ရှင်၊ တန်ခိုးကြီးသောဘုရား၊ ကြီးမြတ်သောဆရာ၊ ဘုရား၏သိုးသငယ်၊ ထမြောက်ခြင်း အရှင်၊ အလုံးစုံတို့၏သခင်၊ ကြီးမြတ်သော ကိုယ်စားပြုအကျိုးဆောင်သူနှင့် ကြွလာမည့် ရှင်ဘုရင် ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်သည် ဤအရာများသာမက သာ၍များသော အရာများလည်းဖြစ်သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ခိုး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သန့်ရှင်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အောင်မြင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွန်အား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ရှည်ခြင်း၊နှင့် သာ၍များစွာသော အရာများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ် သော အရာတိုင်းအတွက် ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၌ ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက 'ထိုသို့ သင်တို့သည် သား ဖြစ်သောကြောင့် အဗ္ဗအဘ ဟုခေါ်တတ်သော သားတော်၏ဝိညာဉ်တော်ကို သင်တို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ ဘုရားသခင် စေလွတ် တော်မူ သည်' ဟုဆိုသည်။(ဂလာ၊ ၄း၆)
Read more: အကျွန်ုပ်တို့၏ အလုံးစုံတို့၌ အလုံးစုံဖြစ်သော...
The Best Choice Practical Christian Living Lesson 3
အောက်ဖော်ပြပါများထဲမှ တစ်ခုရွေးပါဆိုလျှင် သင်ဘယ်အရာကိုရွေးချယ်မည်နည်း။
မိတ်ဆွေများ၊ ကြည့်ဖွယ်ရှုဖွယ်ကောင်းခြင်းများ၊ အသိပညာ၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု၊ ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှု၊ ဥာဏ်ပညာ၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ လူသိရှင်ကြားမှု၊ တန်ခိုးအာဏာ။
မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်၊ မှားယွင်းသောအပြုအမူ၊ မှားယွင်းသောခံစားချက်
သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်သော ရှောလမုန်ကိုလည်း ဘုရားသခင်က ထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ်မှုမျိုးကို ရွေးချယ်စေ ခဲ့ပါသည်။ ဣသရေလဘုရင်အဖြစ် ရှောလမုန်မင်းစိုးစံခါစ၊ တညဉ့်အိပ်မက်ထဲတွင် ဘုရားသခင်က ရှောလမုန်အားထင်ရှား လျက်' ငါပေးရ မည့် ဆုကိုတောင်းလော့ ' ဟုဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏။ ရှောလမုန်သည် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၊ တန်ခိုးအာဏာနှင့် သာယာ ပျော်ရွှင်မှု တို့ကို တောင်းနိုင်သော်လည်း သူသည် ဥာဏ်ပညာကိုသာ တောင်းခဲ့သည်။ ရှောလမုန်က 'သို့ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်ကျွန် သည် ကိုယ်တော်၏ လူ တို့ကို တရားစီရင်နိုင်မည်အကြောင်း၊ကောင်းမကောင်းပိုင်း ခြား၍သိတတ်သောဥာဏ်ကိုပေးသနားတော်မူပါ။ ဤမျှလောက် များစွာသော ကိုယ်တော်၏လူ တို့ကိုအဘယ်သူသည် ကိုယ်အလိုအလျောက် တရားစီရင်နိုင်ပါမည်နည်းဟု တောင်းလျှောက်၏။” ၃ရာ ၃း၇၊၉။
Read more: ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ (၃) - ကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု
ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ (၂) - ထာဝရဘုရားတရားသူကြီး
Read more: ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ (၂) - ထာဝရဘုရားတရားသူကြီး
မိတ်ဆွေအပါအ၀င် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားတိုင်း ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ဘို့ ရန် ဘုရားသခင် အလိုတော် ရှိသည်။ ၁ တိမောသေ ၂း၎ လူအပေါင်းတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍သမ်္မာတရားကို သိစေခြင်းငှါ ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏ဟုဆိုထားပါသည်။ မိတ်ဆွေ သည်လည်း လူအပေါင်း၌ ပါဝင်သောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် မိတ်ဆွေကို ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်စေလိုသည်။ မိတ်ဆွေ ကယ်တင်ခြင်း သို့ ရောက်လိုပါသလား။
Read more: ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၁) - ဘုရားသခင်၏အလိုတော်၊
သမ္မာကျမ်းစာသည် 'ဖော်ပြခြင်း' တစ်ခုဖြစ်သည်။
'ဖော်ပြခြင်း' (revelation) သည် 'ဖုံးကာထားခြင်းကို ဖော်ပြသည်' ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာထဲတွင် ဘုရားသခင်သည် မေးခွန်းများစွာမှ ဖုံးကာထားသောအကာကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ကို မပြောပါက ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်တော့မှ မသိနိုင်သည့် အရာများဖြစ်သော ဖန်ဆင်းခြင်း၊ အသက်၊ သေခြင်းနှင့် နောက်ဘဝနှင့်စပ်ဆိုင်သောအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ လျှို့ဝှက်ချက်များစွာကို ကျမ်းစာထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် 'အပြစ်နွံထဲတွင် လုံးဝဖျက်ဆီးခြင်းခံရသော လူသားနှင့်ခရစ်တော် အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ပြီးပြည့်စုံသော ကယ်တင်ခြင်း'ကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစာကြောင်းကို သင်အလွတ်ရ သင့်သည်။ အကြောင်းမှာ ကျမ်းစာထဲ၌ သင်လေ့လာသောအရာမှန်သမျှ အထက်ပါ စာကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
Read more: ခရစ်တော်၌ ဘ၀သစ် - Bible Study
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထာဝရ ဘုရင် ယေရှုခရစ် - Lesson 12
ယေရှုသည် ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင် ဖြစ်သည်။ .
Read more: ကျွန်ုပ်တို့၏ ထာဝရ ဘုရင် ယေရှုခရစ် - Lesson 12
'ထိုသခင်သည် ဘုရားသခင်၏သဏ္ဍာန်တော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်နှင့်ပြိုင်သောအမှုကို လုယူ ခြင်း အမှုဟူ၍ မထင်မမှတ်လျက်ပင်၊-မိမိအသရေကိုစွန့်၍ အစေခံကျွန်သဏ္ဍာန်ကို ယူဆောင်လျက်၊ လူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌
Read more: အလုံးစုံတို့ကို အစိုးရသောအရှင် သခင်ယေရှုခရစ်...
အသစ်သော မိသားစု A New Family
Andrew Aung Naing
သမ္မာကျမ်းစာကို နားလည်နိုင်ရန် အဓိကသော့ချက်မှာ ဘုရားက လူသားမျိုးနွယ်ကို ဆက်ဆံရာ၌ အာဒံနှင့်ခရစ်တော် ဖြစ်သော အခြေခံကျသော လူနှစ်ယောက်အပေါ် ဘုရားသခင်၏ အမြင်တိုင်း မြင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် အာဒံကို ပထမလူဟု ခေါ်၍
Read more: အသစ်သော မိသားစု A New Family